Misoro yenhau, Chishanu, Chivabvu 20, 2022
Chivabvu 20, 2022
Chikwata cheEuropean Union chinongorora sarudzo, che Election Follow-up Mission, icho chiri kushanya muZimbabwe, chinoita musangano nevatori venhau chichikurudzira hurumende kuti izadzise zvakakomekedzwa kuti zviitwe mushure mesarudzo dzemuna 2018 pamberi pesarudzo dza 2023.
Zimbabwe Energy Regulatory Authority, ZERA, inozivisa nezvekukwira kwemitengo yemafuta ekufambisa dzimotokari kutanga nhasi, izvo zvinonzi zvichawedzera mitengo yezvinhu muzvitoro panguva iyo vakawanda vari kunzi vari kukundikana kutenga zvekudya nekuda kwekushaya mari.
ZEC mudunhu reMasvingo inochema nekudzikira kuri kuramba kuchiita huwandu hwevanhukadzi vari kunyoresa kuvhota, apowo vemasangano akazvimirira vachichemachemawo nekudzikira kwehuwandu hwevanhu vakanyoresa kuvhota muchirongwa chekunyoresa kuvhota chichangopera.
Kubiwa kwemidziyo yekanzuru ine simbi kunonzi kwanyanyisa izvo zvoita kuti kanzuru yeMutare ifunge kudzika mutemo unoita kuti ive mhosva kutenga kana kutengesa simbi dzekanzuru.
Hurumende yeBotswana inowedzera mari inobhadharwa muzvifambiso zveveruzhinji nezvikamu gumi nezvishanu kubva muzana kana kuti 15 percent kutanga nhasi zvichitevera kuratidzira kwanga kuchiitwa nevemabhazi nedzimotokari zvinotakura veruzhinji.
Vanotungamira mutambo we rugby muAfriva, veRugby Africa, vanozivisa kuti Zimbabwe ndiyo ichavhura makundano eAfrica Cup ayo achashandiswa zvekare senzira yekuenda ku2023 World Cup.
Muchirongwa chedu cheLiveTalk na8 pm nhasi, tiri kutarisa nyaya yekukwira kworamba kuchiita mitengo yezvinhu zvinosanganisira chingwa nemafuta ekufambisa dzimotokari munyika.